Umtshato ozukileyo kwisitayela seXVII-XVIII inkulungwane
Mhlawumbi, yonke intombazana ingathanda ubuncinane kanye ebomini bakhe ukuba ivelele njengenkosikazi yangempela kwibhola. Yingakho abanye abatshatileyo, bakhetha iskripthi somtshato wabo, bakhetha indlela ehloniphekileyo yekhulu le-18 le-18-ixesha leebhola, iimbutho zentlalo, izambatho zebhola ezithandekayo kwaye, ngokuqinisekileyo, ukuzingela. Ukuphinda uvuselele lonke lo moya uqobo ngokwenene ngomhla womtshato wakho. Enyanisweni, kulula ukuyilungiselela umtshato onjalo ngokuqhagamshelana negosa apho abasebenzi abaqeqeshwe ngokukhethekileyo baya kuthatha yonke imizamo ebuhlungu, ngokwenza kube lula ubomi kubantwana. Kodwa ukuba isibini esithandanga ubunzima kwaye sinexesha elaneleyo, ngoko kunokwenzeka ukuba uzilungiselele umtshato kwisitayela esihle. Nangona kunjalo, kwiimeko ezinzima kakhulu zokulungiselela umtshato kukukhethwa kwe-toastmaster, iimvumi, umfanekiso kunye nevidiyo ye-cameraman, kunye nabaculi be-staging.
Umtshato ngendlela efanelekileyo ebusika
Ngokuqinisekileyo, ixesha elifanelekileyo lomtshato lolo hlobo ubusika, kuba kwiintsuku zakudala kwakukho ngexesha lebusika apho iibhola zaqala, kwaye ehlobo zonke izikhundla zikhethe ukuphumla ngaphandle kwesixeko kwiindawo zabo zokudada. Ngethuba lokubanda kwemozulu, ubomi belizwe babuye bafumana umxhasi: ukufumana iminyango, ukuvuya kwemikhosi, ukutshata.
Ebusika, iholide ingahle ihlelwe kwivenkile yokutya kunye neCroatia yesizwe okanye kwilizwe leeholide. Ukuhlobisa iholo kwidlo kufuneka kuhambelane nomxholo onikeziwe, kwaye abagadi balala bembethe iilvery and wigs. Kwitheyibhi yokutya kufuneka kube khona izitya kwaye usebenzise ukutya okuseRashiya kuphela, umzekelo, umdlalo, ukugcoba okanye indlebe. Ngokuphathelele umculo womculo, kuphela umculo weklasikhi owamukelwayo kwaye kuphela ekusebenzeni okuqhutywayo - abatsha kunye nabancinci abasemncinci baya kudansa i-waltz yokuqala kwiimvumi zaseRussia.
Kuya kuba yintsusa kwaye engavamile ukuba iqulethe iholide kwindlela "yebaliki yasebusika" kwintendelezo yezindlu zasendulo okanye i-manor, ekhwele i-carriage okanye i-sleigh ngeentsimbi. Uyakwenza udibaniso lwenkqubo ngokuthi uhlele ukukhwabanisa umfanekiso ongenakulibaleka kubantu abasandul 'ukutshata kwiimyuziyamu zobomi bemihla ngemihla kunye nefenitshala, apho ingaphakathi likufuphi nesitayela seXVII-XVIII inkulungwane.
Umtshato ngesitayela esihle ehlobo
Ihlobo lilungele ukulungiselela umtshato ohloniphekileyo kwindawo evulekile. Unokukhetha indawo efanelekileyo, apho kukho indawo efanelekileyo yokuhlala kuyo: iipolonades, imithombo, iigodlo ezinama-green alleys. Kuya kuba mnandi ukulungiselela umtshato ententeni kufuphi nomlambo - eli holide liya kukhunjulwa ngokuqinisekileyo kuzo zonke iindwendwe ezikhoyo.
Ixesha eliqaqambileyo nelinakulibalekiyo lingaba ngumthendeleko womtshato kunye nokubhaliswa kwimeko. Namhlanje, ngaphambi kokuba atshade umxholo omkhulu weempawu, isitayela kunye nemvelaphi yomcimbi womtshato, apho abaququzeleli bathatha yonke into phezu kwabo. Ngokungathandabuzekiyo, isitayela somtshato ohloniphekileyo singabonakaliswa kwingxoxo yazo zonke izinto ezincinci: ukusuka kumculo ukuya ententeni, apho kuya kugcinwa khona ukubhiyozelwa kwaye apho zonke iindwendwe ziyamenywa emtshatweni.
Ukuhlobisa kweholo (itente phantsi kwezulu elivulekile) kufuneka kunikwe ingqwalasela ekhethekileyo: akukho naluphi na uhlobo kufuneka kubekho nayiphi na into yokuhlobisa i-modern decor, i-ornaments ehlanjululwayo, ehlanganiswe nomoya wexesha elidlulileyo. Izicathulo ezahlukeneyo, ikhandlela, iintyatyambo ezitsha kwiipastile eziphezulu, izitya ze-silk kunye neentlobo ezahlukeneyo ezithandiweyo.
Ngombulelo womtshato oqaqambileyo ukuba intombazana inokuziva injengendodakazi kwi-corset kunye neengubo zebhola eziqhayisayo ezinokuthi zithengwe okanye zitshintshwe ukuze zenzeke. Ngokuncedwa kwezixhobo zokusebenza unako ukuzalisekisa umfanekiso wesinenekazi. Ingaba ngumvulovu ovulekile, kunye nomqhubi, nentsimbi, kunye neiglavu. I-hairstyle nayo ingenziwa kwindlela yeXVII-XVIII inkulungwane. Ukuba umtshato uwela ngexesha lebusika, iingubo ezimhlophe zeqhwa kunye ne-muff zifanelekile kumfanekiso womtshakazi. Ngokuqhelekileyo, umtshakazi angaphinda azaliswe ngokutsha.
Ukuze umyeni akwazi ukuxhasa le style isabalulekile. Kwimeko yomtshato oqaqambileyo, ingubo ephethe ihembe elimhlophe okanye ihembe eliphethe ikolera echongiweyo, umtya wesaphetha okanye isikhala esisezantsi kwentamo yakhe imfuneko. Kwimozulu epholileyo, umyeni ufanelekile le ndlela yengubo emnyama kunye neiglavu.
Zonke iindwendwe ezimenywayo kufuneka ziqaphele ukuhambelana nesitayela esihle kumbhiyozo. Ekubeni ibhola igqoke kunye neengubo ezikwinqanaba le-XVII-XVIII inkulungwane ayifumanekanga nonke, kuya kuba mnandi ukuba bonke abafazi bafike kwiingubo zokugqoka ezinde, kunye nezigqoko kwiingubo zokugqoka okanye iebhatyi. Ukongezelela, iindwendwe zingancedisa imifanekiso yazo kunye nezixhobo: izitya zabesetyhini kunye neentonga zeentlobo zamadoda, abalandeli bamantombazana kunye nokuhamba kweentonga zamadoda.
Ukuzonwabisa ngomtshato omhle
Ukuzonwabisa kwimitshato kwindlela efanelekileyo ebusika kunye nobusika kunokuhluka kakhulu: ukuhamba kunye nokugibela ihashe kwindalo, ukutshatyalaliswa okanye ukuhamba. Unokuyilungiselela ibhola elidala leminyaka yeXVII-XVIII, unike ithuba lokuba zonke iindwendwe zibonise amandla abo okudansa. Kuphela kule njongo kuya kufuneka ukuba ukhethe kwangaphambili iholo edilini, apho kuya kubakho indawo ekhululekile.
Ukongezelela, unokuhlela ukudubula kwiithagethi, umdlalo wokulahlekelwa yimisebenzi enomdla, uluhlu lokudubula kulabo abafuna ukuzonwabisa nabahlaseli be-sham. Akukho nto engafanelekanga ukuba yayiza kubakho emtshatweni we-buffoon.
Umtshato ngesitala somthi
Imodeli engaqhelekanga kwi-Giles Deacon ibonisa eLondon
Uhambo oluya eSt. Petersburg: phi na ukuhlala kwisixeko kwi-Neva?
Ngantoni na ngokukhawuleza ukubeka umfanekiso ngokulandelelana emva kokubeleka?
Umtshato xa umntu ekhulile
Indoda ayichazi iimvakalelo zakhe
Impilo yomfazi okhulelweyo kunye nokuzilolonga
I-Snack esuka kwi-pepper yaseBulgaria
I-Banana pudding nekhadiyamom
Ukuphulwa komsebenzi wokuzala kunye nokungabikho komntwana
I Braised Brussels ihluma
Iimfihlelo zenkampani ye-press efanelekileyo: 3 imithetho eya kukunceda ufike ngokukhawuleza ukuza
Umfazi uphunga njani?
Ukuphulukisa iipropati zeoli ye-linseed
Kwingqungquthela yokuguqula: iqoqo leCarnaby Street Street kusuka eRoberto Coin
I-calcium ekudleni abantwana
Iifungus of foot and toes